आठौ ं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता दाङमै ल्याउनेछौ ं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / आठौ ं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता दाङमै ल्याउनेछौ ं
आठौ ं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता दाङमै ल्याउनेछौ ं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता November 8, 2017	0 122 Views
दाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष
२०४८ सालमा स् थापना भएको दाङ क्रिके ट संघको जिल्ला अधिवे शनले नया“ ने तृत्व चयन गरे को छ । क्रिके ट खे लको विकास र खे लाडीको भविष्यका लागि क्रियाशील संघले यही कार्तिक २७ गते दे खि घो राहीको गुलरियामा राष्ट्रियस् तरको प्रतियो गिता आयो जना गदैर् छ । आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गितालाई लक्षित गरे र खे ल मै दान निर्माण र प्रदे शस् तरकै अहिले सम्मकै ठूलो प्रतियो गिताको आयो जना गर्न लागे को दाङ क्रिके ट संघले जिल्लाको खे लकूद विकास र नया“ ने तृत्वका आगामी यो जनाका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप मजगै या“स“ग गरे को कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
पुनः ने तृत्वमा आउनुभयो , आगामी कार्यकालमा के गर्नुहुन्छ ?
दाङमा क्रिके ट खे ल त्यति चर्चित अवस् थामा थिएन र पनि हामीले धे रै उपलव्धिहरु हासिल गरे का छौ ं । सात पुरुष र एक महिला अन्तर्राष्ट्रिय खे लाडी उत्पादन गरिसके का छौ ं । तथापि हामीमाथि थुप्रै चुनौ ती पनि छन् । सबै भन्दा जिल्लामा खे ल्नयो ग्य एउटा पनि भौ तिक संरचना छै न । अहिले पनि को चको व्यवस् था छै न । यति ह“ुदाह“ुदै पनि हामीले क्रिके टको विकासका लागि काम गरिरहे का छांै  । तुलसीपुर, घो राही र लमहीमा खे ल मै दान बनाउन पहल गरिरहे का छौ ं । अहिले त स् थानीय सरकार पनि छन् । स् थानीय तहका प्रमुखहरुलाई क्रिके ट बल नै बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने काम हामीले गरिरहे का छौ ं । म भर्खरै ने तृत्वमा दो हो रिएको अवस् था छ । यदि आउने चार वर्ष सुखद नै भयो भने मै ले लमहीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस् तरको प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर् , घो राहीमा राष्ट्रियस् तरको खे ल सञ्चालन गनेर् र तुलसीपुरमा राष्ट्रियस् तरको खे ल मै दान बनाउने तथा जिल्लाका सबै स् थानीय तहमा क्रिके ट मै दान बनाउन पहल गनेर् छौ ं । त्यसको शुरुवात पनि भइसके को छ । घो राही उपमहानगरपालिकाले गुलरियामा प्रदे शस् तरको क्रिके ट मै दान बनाउने नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएको छ । बजे टसमे त आइसके को अवस् था छ । उता लमहीमा पनि काम भइरहे को छ भने तुलसीपुरमा पनि बजे ट विनियो जन भइसके को अवस् था छ । यति मात्रै हो इन आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिताको कम्तिमा क्रिके टको एउटा इभे न्ट दाङमा बनाउनका लागि हामीहरु लागिरहे का छौ ं । त्यस् तै खे लाडीहरुको सुविधा र प्राविधिकहरुलाई यही क्रिके टमा लागे र अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गनेर् मे रो मुख्य काम हुने छ ।
दाङमा क्रिके टको भविष्य छ र ?
सानै दे खि क्रिके ट खे लियो , यसलाई छो ड्न सकिएन । अहिले पनि प्राविधिक र व्यवस् थापकीय जिम्मे वारी लिएर काम गरिरहे का छौ ं । वास् तवमा भन्ने हो भने खे लकूदको भविष्य छ । आर्थिक कुरा मात्र नभएर सामाजिक व्यक्तित्व निर्माणको कुरा पनि छ । त्यस् तै मान्छे लाई अनुशासित बनाउने काम पनि गर्छ । अलिकति राज्यको ध्यान नगएर अप्ठे रो पनि छ । सुस् त–सुस् त भए पनि भविष्य राम्रै छ । स् थानीय तहहरुलाई कुरा बुझाउने काम गरिरहे का छौ ं । विस् तारै खे लकूदमा भविष्य छ भन्ने कुराको पुष्टि ह“ुदै जाने छ ।
खे ल खे ले र जीविका चलाउन सक्ने अवस् था छ त ?
सा“च्चिकै व्यावसायिक भएर जान्छु भने र जो लागे को छ त्यसलाई अहिले पनि खे ल खे ले र जीवन चलाउन सक्ने अवस् था छ । दाङकै खे लाडीहरु पनि खे ले र जीवन चलाउने अवस् थामा पुग्नुभएको छ । विदे शमा गएर फूटवल खे लिरहनुभएको छ । क्रिके ट खे ले रै बा“चिरहनुभएको छ । लमहीकै राजवीर सिंहले
लाखौ ं कमाइरहनुभएको छ । त्यस् तै भुपे न्द्र थापालगायतका खे लाडीहरु जो व्यावसायिकरुपमै खे ल्नुहुन्छ र उहा“हरुलाई
खे ले रै जीवन धान्ने अवस् था छ ।
दाङमा खे लकूदको विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
सबै भन्दा पहिले हामीले खे ल मै दान निर्माण गर्नु जरुरी छ । कम्तिमा जिल्लाका मुख्य–मुख्य शहरहरु तुलसीपुर, नारायणपुर, घो राही, लमही, भालुबाङलगायतका क्षे त्रमा खे ल मै दान बनाउन सक्यौ ं र घो राही, लमही र तुलसीपुरमा प्रशिक्षण के न्द्रहरु स् थापना गर्न सकियो भने खे लकूदको विकास गर्न सकिन्छ । खासगरी घो राही उपमहानगरपालिकाले त नीति कार्यक्रममै प्रशिक्षण के न्द्र निर्माणको शुरुवात गरिसके को अवस् था छ । विस् तारै सबै ठाउ“मा यी पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सकियो भने खे लकूदमा के ही गरे र दे खाउन सकिन्छ । दाङलाई पनि क्रिके टरहरुको जिल्ला बनाउन सक्छांै  । अहिले जिल्लामा खे ल्नयो ग्य मै दान नै छै न । जसो तसो गुलरियाको मै दानमा एउटा राष्ट्रियस् तरको क्रिके ट प्रतियो गिता बनाउन थाले का छौ ं । त्यसमा थुप्रै चुनौ ती छन् । तर हामीलाई गनैर् पनेर् बाध्यता पनि छ । किनभने खे लकूदको विकासका लागि त्यो अनिवार्य छ । सानातिना जो खिमको पर्वाह छै न हामीलाई ।
पूर्वाधारमा सरो कारवालाहरुको ध्यान नै गएन है अहिले सम्म ?
वास् तवमै भन्ने हो भने पूर्वाधारमा राज्यको ध्यान जान नसके को दे खिन्छ । कुनै पनि क्षे त्रको विकासका लागि यो जना चाहिन्छ । अहिले कुनै पनि यो जनाबिना खे लकूद चलिरहे को अवस् था छ । १० वर्षपछि दाङको क्रिके ट कहा“ पुग्ने भन्ने यो जना कसै स‘“ग नभएको अनि सबै भन्दा त खे ल क्षे त्र राजनीतिको चपे टामा परे को अवस् था छ । जिल्ला खे लकूद विकास समितिमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने र खे लकूदभन्दा बाहिरका मान्छे हरु त्यहा“ आउ“दा खे लाडीहरुको समस् या नबुझ्ने लगायतका समस् याले पनि खे लकूदको विकासमा समस् या आएको छ । यस् तो समस् या जिल्लामा मात्रै हो इन, क्षे त्र र के न्द्रमा पनि छ । कतिपय जिल्लामा काम गनेर् मान्छे हरु पनि हुनुहुन्छ । तर के न्द्र र क्षे त्रले आफ्नै हिसाबले काम गर्दा सो चे जतिको विकास हुन सके को छै न । सबै भन्दा राजनीतिक हस् तक्षे प रो किने हो भने खे लकूदले फड्को मार्छ ।
गाउ“स् तरमा हुने टुर्नामे न्टलाई निरन्तरता दिन यहा“हरुले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हैन र ?
हामी लागे कै छौ ं । गाउ“स् तरमै हामीले खे लाडी उत्पादन गरिरहे को अवस् था छ दाङमा । तर यहा“को बिडम्वना के छ भने खे लाडी छनो ट के न्द्रबाटै हुन्छ । हुनुपनेर् तल्लो तहबाट हो  । खे लाडीहरुको प्रदर्शनका आधारमा छनो ट हुने अवस् था तपाइ“ले भने जस् तै टुर्नामे न्टबाट हुने हो । तर त्यो हुन सके को छै न । अहिले माथिबाट यति जनाको क्याम्प भने र पठाउ“छ । त्यसमा हामीले चिने जाने को हिसावले के ही क्षमतावान खे लाडीहरुलाई पनि पार्न सफल भएका छौ ं । तर सा“च्चिकै तल्लो तहबाट खे लाडीको प्रदर्शनलाई हे रे र खे लाडी छनो ट गनेर् काम कुनै पनि निकायले गर्न सके को छै न । यसलाई सच्याउनुपर्छ । यदि त्यस् तो हुन सके न भने सिंगो खे ल क्षे त्रलाई नै हानी भइरहन्छ । नवप्रतिभा आउने बाटो नै बन्द भएको अवस् था छ । रह्यो हाम्रो भूमिकाको कुरा, हामी पनि राज्यको संयन्त्रभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस् था पनि छै न र हु“दै न । राज्यलाई झक्झक्याउने काम हामीले गनेर् हो र तपाइ“हरुजस् तै मिडियाकर्मीहरुले पनि झक्झक्याउनुपर्छ । हामी पनि त्यसमा लागे कै छौ ं । हामी प्रतिबन्धित अवस् थामा पनि दाङ क्रिके ट संघले विभिन्न समयमा प्रतियो गिताहरु आयो जना गनेर् काम भइरहे को छ । जसले नया“ प्रतिभाको खो जी गनेर् काम भइरहे को छ भने विद्यालयस् तरमा पनि तालिमको व्यवस् था हामीले गरिरहे का छौ ं ।
स् थानीय तहलाई खे लकूदमा लगानी बढाउन दबाब दिन सकिन्छ हो ला नि ?
अवश्य पनि । हामीले स् थानीय तहका प्रमुखहरुलाई भे टे र ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौ ं । अरुले जस् तो नारा जुलुस गर्नुपरे को छै न । सा“च्चै भन्ने हो भने स् थानीय तह आइसके पछि हामीलाई अलि राहत मिले को महसुस हामीले गरे का छौ ं । तुलसीपुर, घो राही उपमनपा र लमही नपा तथा अन्य स् थानीय तहमा पनि हामीले कुरा राखे का छौ ं । यसमा सकारात्मक नै पाएका छौ ं । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनताको काम र आवश्यकता बुझनुभएको छ । यसभन्दा पहिले माथिबाटै आउ“थ्यो हाम्रो कुरा सुनुवाइ ह“ुदै नथ्यो । तर अहिले जनप्रतिनिधिहरुले हाम्रो कुरा सुन्ने वातावरण भएको छ । सुन्नुभएको छ र के ही काम पनि शुरु भइसके को अवस् था छ ।
पूर्वाधारको अभाव हु“दाह“ुदै राष्ट्रियस् तरको प्रतियो गिता गदैर् हुनुहुन्छ गाह्रो हो ला नि ?
हो , अप्ठे रो त छ । तर बाध्यता पनि छ । हामीले जसरी काम गरे का छौ ं, त्यो मे हनतअनुसार एक्स् पो ज हुने मौ का पाउन सकिएको छै न । हामीस“ग खे लाडी छन् । खे ल मै दान र प्रशिक्षकहरुको अभाव भइनै रह्यो  । यी सबै समस् याको समाधान खो ज्न पनि हामीले हाम्रो क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपनेर् थियो  । हो , त्यही क्षमता प्रदर्शनका लागि पनि प्रतियो गिता आयो जना गरिएको हो  । त्यसै गरी अब आठांै राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता मध्यपश्चिममा हुन लागिरहे को छ । तर मध्यपश्चिमकै अन्य शहरहरुमा मात्रै प्रतियो गिता हुने अवस् था छ । त्यसलाई तो ड्नका लागि पनि हामीले खे लकूद प्रतियो गिता गर्नुपरे को हो  । हाम्रो माग छ कि राष्ट्रिय प्रतियो गिताअन्तर्गत कम्तिमा क्रिके टको इभे न्ट्स दाङ हो स् । हामी पनि राष्ट्रिय प्रतियो गिता सञ्चालन गर्न सक्छौ ं । क्षमता छ भन्ने दे खाउनुपनेर् छ । घो राही र लमहीमा क्रिके ट मै दानहरु छन् । आगामी राष्ट्रिय प्रतियो गिताको क्रिके टको कुनै पनि इभे न्ट्स दाङमा ल्याउने हाम्रो उद्दे श्य छ र हामी ल्याउ“छौ ं पनि । यसर्थ थुप्रै चुनौ ती हु“दाह“ुदै प्रतियो गिता आयो जना गरे का हांै  ।
दंङाली टी टवान्टी कपको तयारी कहा“ पुग्यो ?
हामी अन्तिम चरणमा पुगे का छांै  । टीम दर्ताको काम भइसके को छ । दे शका विभिन्न १६ वटा समूहहरु प्रतिस् पर्धाका लागि आउनुभएको छ । स् पो न्सरहरु पनि फाइनल भइसके का छन् । खे ल मै दान निर्माण पनि अन्तिम अवस् थामा पुगे को छ । ८० प्रतिशत काम भइसके को छ । बा“की कामका लागि सबै लागिरहे का छौ ं । जो श जा“गरका साथ अगाडि बढे का छौ ं । मलाई लाग्छ पा“च नम्वर प्रदे शको सबै भन्दा ठूलो प्रतियो गिता हुने छ यो  ।
यो प्रतियो गिताबाट दाङले के पाउ“छ ?
सबै भन्दा ठूलो कुरा त खे लकूदको हिसाबले दाङ दे शभर चिनिने छ । हामी बाहिर खे ल्न गएको बे ला दाङमा क्रिके ट खे ल्नुहुन्छ र ? भन्ने हरु पनि थिए । उनीहरुलाई हामी दाङमा क्रिके टको विकास कति भएको छ भन्ने दे खाउन पनि चाहन्छौ ं । दाङ भौ गो लिक र प्राकृतिकरुपले कति सुन्दर छ र यहा“ क्रिके टको भविष्य कति छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन चाहन्छांै  । क्रिके ट खे ल्नका लागि दाङ वातावरणीय हिसाबले कति अनुकूल छ भन्ने कुराको अनुभव अन्य जिल्लाका खे लाडीहरुलाई गराउने छांै  । यो प्रतियो गिताले आशन्न आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूदको क्रिके टको इभे न्ट्स दाङमा ल्याउन सजिलो हुने छ भने यहा“का सरो कारवालाहरुले पनि दाङमा क्रिके टको विकास र प्रतिभा पहिचान गनेर् मौ का पाउनुहुने छ । मुख्यगरी यहा“ खे ल पर्यटनको विकास हुने छ भन्ने हाम्रो अपे क्षा छ । दङाली टी टवान्टी क्रिके ट कपमा मात्रै १६ समूहले भाग लि“दै छन् । एउटा टिममा कम्तिमा १८ जना आउने छन् । १८ जनाको दरले १६ टिमका खे लाडीहरु दाङ आएर यहीको हो टलमा १० दिनसम्म बस् ने छन् । यहीको उत्पादन खाने छन् भने यहा“का पर्यटकीय क्षे त्रको अवलो कन गनेर् छन् । खासगरी धारापानी क्षे त्र, अम्बिके श्वरी, बाह्रकुने लगायतका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षे त्रको अवलो कन गर्दा प्रचारप्रसार पनि हुने छ । स“गस“गै आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद यहा“ भयो भने त झन हजारौ ं खे लाडीहरुलाई दाङ भिœयाउन सकिने छ । यसले जिल्लाको विकासमा टे वा पु¥याउने छ ।
अन्त्यमा, छुटे का के ही भए
के ही वर्षयता दाङका मिडियाहरुले क्रिके टको विकासका लागि जुन खालको सहयो ग गरे का छन् म मिडियाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । साथै यही कार्तिक २७ गते दे खि हुन लागे को दङाली टी ट्वान्टी क्रिके ट कपलाई सफल बनाउन पनि मिडियाहरुको सहयो गको अपे क्षा गर्न चाहन्छु । सहयो ग गरिरहनु पनि भएको छ । ने पाल क्रिके ट संघ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिके ट काउन्सिल (आइसिसी) को प्रतिबन्धमा परे का छौ ं । हामीलाई अहिले आर्थिक प्राविधिक सहयो ग के ही पनि छै न । यस् तो अवस् थामा अन्य जिल्लाहरुमा खासै गतिविधि हुन सकिरहे को छै न । तर दाङ जिल्लाले चाहि“ क्रिके टलाई मर्न दिनु हु“दै न भन्ने हे तुले हामीहरुले आफ्नै लगानीमा, साथीभाइहरुको सहयो गमा स् थानीय तह र के ही स् पो न्सर खो जे र प्रतियो गिता आयो जना गरे का छौ ं । अप्ठे रो अवस् था छ । अहिले भर्खरै नया“ विधान अनुसार दाङ क्रिके ट संघको निर्वाचन गरे र आइसिसीमा पठाएका छौ ं । यदि सा“च्चै आइसिसीले हाम्रो प्रतिबन्ध फुकुवा ग¥यो भने दाङले चा“डै नै क्रिके टको हिसाबमा सबै भन्दा अगाडि र प्रगति गरे को जिल्लाको रुपमा स् थापित हुने छौ ं ।
Previous: आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ
Next: लोकतन्त्रवादीलाई जिताउन गिरीको आग्रह